Macalinka Peter Oo Magacaabay Laba Xiddig Oo Man United Ku Hogaamin Kara Ku Guulaysiga Premier League —
Home » Macalinka Peter Oo Magacaabay Laba Xiddig Oo Man United Ku Hogaamin Kara Ku Guulaysiga Premier League
Macalinka Peter Oo Magacaabay Laba Xiddig Oo Man United Ku Hogaamin Kara Ku Guulaysiga Premier League
Peter Crouch ayaa sheegay in ayna Man United diyaar u ahayn in ay ku guulaysato horyaalka premier League laakiin waxa uu sheegay in ay kooxda Ole Gunnar Solskjaer noqon karto kooxda ugu awooda badan hadii ay la soo saxiixato midkood xiddigaha Declan Rice ama Kalvin Phillips.
Kadib markii ay si fiican ku bilaabatay xilli ciyaareedka, Red Devils ayaa wakhti adag ku jirtay toodbaadyadii ugu dambeeyay iyada oo guuldarooyin kala kulantay kooxaha Young Boys, West Ham iyo Aston Villa.
Crouch ayaa sheegay in ayna Man United diyaar u ahayn ku guulaysiga premier League xilli ciyaareedkan laakiin hadii ay xagaaga la soo saxiixato midkood xiddigaha Declan Rice ama Kalvin Phillips ay wax walba is badali doonaan.
“Man United waxa ay haystaa koox cajiib ah oo uu ku jiro xiddiga ugu fiican adduunka”ayuu Crouch u sheegay Mailsport.
“Laakiin wali waxa ay u baahanyihiin horumar khadka dhexe ah diyaarna uma ahan u tartamista horyaalka”.
“Hadii ay la soo saxiixdaan midkood xiddigaha Declan Rice ama Kalvin Phillips waxa ay noqon doontaa kooxda ugu xoogan premier League’.